Maadheelee Danuu Filachuu
Hammangaa rogafree filadhu
Qabduu hantuutee cuqaasuudhaan, xiyyoo tokko irraa gara xiyyoo faallaa hammangaa isa shaffaxaatti harkisi.
Maadhee baaqqee mallatteessi
Kan armaan gadii keessaa tokko dalagi:
Cuqaasi, achiin Shift-maadhee cuqaasi.
Qabduu hantuutee gad qabuudhaan, hammangaa maadheelee lama irra harkisi, qabduu hantuutee hin gadhiisin, achiin gara maadhee jalqabaatti harkisi. Amma maadhee tokko tokkoon harkisii-kaa'iin deemsisuu dandeessa.
Man'eelee faca'an garaagaraa filadhu.
Yoo xiqqaate man'ee tokko mallatteessi. Achiin yeroo AjajaCtrl gad qabdu, tokkoon tokkoo man'eelee dabalataa cuqaasi.
Haalata mallatteessuu dabarsi
Kabala haalataa irratti, gara haalata mallatteessuu dabarsuuf sanduuqa waayoo STD / EXT / ADD qabu cuqaasi:
Bu'aa hantuutee cuqaasuu
Cuqaasni hantuutee maadhee irratti cuqaaste filata. Maadheelee mallattaa'an mara mallattoo irraa nulqa.
Cuqaasni hantuutee man'ee keessaa gara man'eelee duraan mallattaa'aniitti dabala. Cuqaasni hantuutee man'ee mallattaa'e keessaa man'ee mallattoo irraa mulqa. Karaa biraatiin, man'eelee AjajaCtrl-cuqaasi.
Title is: Maadheelee Danuu Filachuu